dumbbells amidy Mpanamboatra sy mpamatsy - China dumbbells amidy Factory
baomba mampiakatra lanja
bara fitambarana lanja
kettlebell azo ovaina
dumbbells azo ovaina
Barbellie Olaimpika Standard Barbie 2.2m
Adjustbale Cast Iron Kettlebell Weight Sets
Dumbbell 24KG azo ovaina
Takelaka lanja mavesatra telo-lavaka
Rubber Hex dumbbells dia nomena anarana araka ny fitaovany sy ny endriny tokana. Noho ireo lafiny marobe, tsy hanakodia ny iray apetraka amin'ny tany izy ireo. Tombony lehibe izany raha mifanakalo eo amin'ny lanjanao na amin'ny fanazaran-tena ianao ary manangona azy ireo tsy tapaka ary mametraka azy ireo. Izy ireo koa dia tsara ho an'ny fizaran-tany mifototra amin'ny gorodona, toy ny dumbbell push-ups noho ny fahatokisan'izy ireo.
Ny hex rubber dumbbell dia tonga mora vidy kokoa noho ny fingotra mahazatra na urethane dumbbell izay mahatonga azy io ho safidy teti-bola tsara. Ho fanampin'izany, ny lafiny dia manamora ny fitahirizan'izy ireo raha te hampiasa vola amin'ny talantalana ianao.
Fiovan'ny sakana mavesatra haingana - Tsy mihoatra ny iray segondra, ampiasao fotsiny ny tanana tokana hanodinana ny bara fametahana, ary henoy ny "CLICK", voafantina avy hatrany ny lanjany.
Mety ho an'ny matihanina sy vao manomboka - Yolanda Dumbbell azo ovaina dia manolotra lanjany mavesatra be avy 4KG, 9KG, 14KG, 19KG ary 24KG. Izy io dia mety hiteraka fanazaran-tena manankarena mandritra ny fiofanana ho an'ny matihanina sy ho an'ny vao manomboka.
Safe and Compact - Ity dumbbell azo ovaina ity dia manana rafitra lozika azo antoka amin'ny takelaka lanja. Afaka misoroka ny filatsahan'ny takelaka mavesatra mandritra ny fanazaran-tena. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny toerana fampiasanao voafetra, Manambatra ireo sakana mavesatra marobe ho iray izy io mba hotahirizina mora foana ao an-trano na gym.
Takelaka lanja manohitra ny harafesina - Ny takelaka mavesatra dia vita amin'ny Silicon Steal Sheet. Vovoka nopetahany anti-harafesina izy io.
No. 42, 4th Jinfeng Road, Jinfeng Community, Mifeng Village, Yipeng Street, Dajiangdong Industrial Cluster Zone, Hangzhou, Zhejiang, China 311225